Kurume kweNonviolence inofamba kuburikidza neLatin America - Iyo Nyika Kurume
musha » Noticias » Rwepamutemo Rezvemitemo » Kurume kweNonviolence inofamba kuburikidza neLatin America
A Kurume anofamba achipfuura muMultiethnic uye Pluricultural Latin America yeNonviolence
Hazvizivikanwe kune chero munhu kuti mhirizhonga yakagara yakaiswa pasi rese.
MuLatin America vanhu, nemhando dzakasiyana, vanosiya nzira dzemhirizhonga dzinoronga nzanga nekuunza semhedzisiro nzara, kushaikwa kwemabasa, chirwere uye kufa, zvichinyudza vanhu mumarwadzo nekutambura. Zvisinei, mhirizhonga yakatora vanhu vedu.
Mhirizhonga yemumuviri: Kuuraya kwakarongeka, kutsakatika kwevanhu, kudzvinyirira kuratidzira munharaunda, vakadzi, kutengeswa kwevanhu, pakati pezvimwe zviratidzo.
Kutyorwa kwekodzero dzevanhu: Kushaya basa, hutano, kushaya pekugara, kushaya mvura, kumanikidzwa kutama, rusarura, nezvimwe.
Kuparadzwa kwezvakatipoteredza, pekugara zvese zvipenyu: Mega-kuchera, agro-chepfu fumigations, kutemwa kwemasango, moto, mafashama, etc.
Kutaurwa kwakakosha kunoenderana nevanhu veko, avo, vakatorerwa minda yavo, vanoona kodzero dzavo dzichityorwa mazuva ese, vachimanikidzwa kugara mukuzvidzwa.
Tinogona here kushandura mafambiro ezviitiko zvinozivisa njodzi dzevanhu dzehukuru husati hwambozivikanwa?
Isu tese tine rimwe basa pane zviri kuitika, isu tinofanirwa kutora danho, kubatanidza izwi redu nemanzwiro edu, kufunga, kunzwa uye kuita munzira imwechete inoshandura. Ngatisatarisira kuti vamwe vaite saizvozvo.
Mubatanidzwa wemamirioni avanhu mitauro, madzinza, zvitendero uye tsika dzakasiyana zvinodikanwa kuvesa hana dzevanhu nechiedza cheNonviolence.
Nyika isina Hondo uye Mhirizhonga Association, muviri weHumanist Movement, wakasimudzira nekuronga pamwechete nemamwe mapoka, kufora vanofamba matunhu nechinangwa chekusimudza chisingaite chisimba kuita kuti zvioneke zviito zvakanaka zvinoitwa nevanhu vazhinji munzira iyoyo.
Zviitiko zvakakosha mune izvi zvave zviri:
2009-2010 Yekutanga Nyika Kurume Yerunyararo uye Kusasurukirwa
2017- Kutanga Central America Kurume
2018- Kutanga South America Kurume
2019- 2020. Yechipiri Nyika Kurume
2021- Nhasi tinoshambadza nemufaro mukuru kufora kutsva, ino nguva chaiyo uye takatarisana kumeso, mudunhu rese ratinoda kubva muna Gunyana 15 kusvika Gumiguru 2 - RUCHI MARCH LATIN AMERICAN- MULTI-ETHNIC NEZVINHU ZVINOGONESESA ZVE RUDO.
Isu tinofora muchiitiko chekutanga kuti tibatanidze pachedu, nekuti nzira yekutanga yekufamba inzira yemukati, kutarisisa maitiro edu, kukunda mhirizhonga yedu yemukati nekuzvibata nemutsa, tichizviyananisa isu uye tichishuvira kurarama mukubatana uye mukati kutyaira.
Isu tinofora tichiisa iyo Yekudaira seyakakosha kukosha muhukama hwedu, ndiko kuti, kubata vamwe nenzira yataizoda kuitirwa isu.
Isu tinofora tichidzidza kugadzirisa kusawirirana nenzira yakanaka uye inovaka, mukuwedzera kuchinjika kune ino nyika iyo isu tine mukana wekushandura.
Takatanga kufamba mukondinendi, zvirinani uye tiri munhu, kusimbisa izwi rinosheedzera nyika zhinji munhu. Hatichakwanise kuona kutambura kwakanyanya muvamwe vedu vanhu.
Vakabatana Latin Latin neCaribbean vanhu, zvizvarwa zvemo, MaAfro-vazukuru nevagari venharaunda huru iyi, isu takaunganidza pamwe nekufora, kurwisa nzira dzakasiyana dzemhirizhonga uye kuvaka nzanga yakasimba uye isina mhirizhonga.
Muchidimbu, tinoungana uye tinofamba kuenda ku:
1- Ramba uye shandura mhando dzese dzemhirizhonga dziripo munharaunda medu: panyama, murume kana mukadzi, mazwi, pfungwa, pfungwa, hupfumi, dzinza pamwe nechitendero.
2- Rwira Kusasarura uye nemikana yakaenzana seyakavanzika yeruzhinji isina rusaruro, kuona kugoverwa kwakanaka kwehupfumi.
3- Ratidzai vanhu vedu vechiNative muLatin America yese, vachiziva kodzero dzavo uye nemipiro yemadzitateguru avo.
4- Izvo zvinoreva kuramba kushandisa hondo senzira yekugadzirisa kusawirirana. Kuderera mubhajeti rekutorwa kwemarudzi ese ezvombo.
5- Iti Kwete pakugadzwa kwenzvimbo dzekunze dzechiuto, kurayira kubviswa kwezviripo, uye vese vanopindira mumatunhu ekunze.
6- Kurudzira kusaina nekusimbiswa kweChibvumirano cheProhibition yeNuclear Weapons (TPAN) mudunhu rese. Kurudzira kugadzirwa kweChibvumirano cheTratelolco II.
7- Ita zvinoonekwa zvisingaite zvechisimba uchifarira kuvaka kweUniversal Human Nation, zvinoenderana nepasi redu.
8- Vaka nzvimbo idzo zvizvarwa zvitsva zvinogona kuzviratidza uye nekukudziridza, munzvimbo isiri yemagariro.
9- Simudza ruzivo nezve dambudziko rezvakatipoteredza, kudziya kwepasi uye nenjodzi yakakomba inogadzirwa nemigodhi yakavhurika, kutemwa kwemiti uye kushandiswa kwemishonga yezvipembenene muzvirimwa. Kusavharirwa kuwana mvura, sekwevanhu kodzero.
10- Kusimudzira tsika nemagariro, zvematongerwo enyika pamwe nezvehupfumi munyika dzese dzeLatin America; yeLatin America yemahara.
11- Kubudirira kusununguka kwevanhu nekubvisa mavhiza pakati penyika dziri mudunhu uye kugadzira pasipoti yemugari weLatin America.
Isu tinoshuvira izvo nekutenderera nharaunda nekusimbisa kubatana Latin America inovakazve nhoroondo yedu yakajairika, mukutsvaga yekutendeuka mukusiyana uye Nonviolence.
Ruzhinji rwevanhu havade mhirizhonga, asi kuibvisa zvinoita kunge kusingagoneki. Neichi chikonzero, isu tinonzwisisa izvo kuwedzera kune ita zviito zvemagariro, isu tinofanirwa kushanda kuti tiongorore zvitendero iyo inotenderedza ichi chinonzi chinenge chisingachinji chokwadi. Tinofanira kudaro simbisa kutenda kwedu kwemukati kwatinogona kuchinja, sevanhu uye sevanhu.
Inguva yekubatanidza, kuunganidza uye kufamba kweNonviolence
Nonviolence paKurume kuburikidza neLatin America.
Mamwe mashoko pa: https://theworldmarch.org/marcha-latinoamericana/ uye kufora uye maitiro acho: Yekutanga Latin American Kurume - The World Kurume (theworldmarch.org)
Taura nesu uye utevere isu pa:
Dhawunirodha ichi chiratidzo: Kurume kweNonviolence inofamba kuburikidza neLatin America